Arụpụtaghị: The "Ngwa ngwa, Onu ala, Ezi" Rubrik | Martech Zone
Arụpụtaghị: "Ngwa ngwa, Onu Ala, Ezi" Rubrik
Saturday, May 29, 2010 Sunday, October 4, 2015 Robby Ogbugbu
Ogologo oge enwere ndị njikwa ọrụ, enwere usoro aghụghọ na-adịghị ọcha maka ịkọwa ọrụ ọ bụla. A na-akpọ ya iwu “Ngwa-Ngwa-Ngwa,” ọ ga-ewe gị ihe dị ka sekọnd ise ịghọta.
Nke a bụ iwu:
Ngwa ngwa, dị ọnụ ala ma ọ bụ dị mma: Họrọ abụọ ọ bụla.
Ebumnuche nke iwu a bụ ichetara anyị na mbọ niile dị mgbagwoju anya chọrọ ahia. Mgbe obula anyi nwere uru na otu mpaghara, enwere obi abuo na anyi aghaghi inwe ebe ozo. Yabụ kedu ihe ngwa-ọnụ-adịghị mma pụtara maka ndị na-agụ Martech? Ka anyị soro ihe niile.
Pụtara nke ibu ọnụ, Onweghị ọnụ ma dịkwa mma
Anyị niile nwere echiche nke ọsọ. Ọ bụ ọsọ izu ụka ebe a na Indianapolis, na ndị kasị ụgbọ ala-enweta nkwanye. N’agbanyeghi oru ị n’achọ ime, ma ọ bụ ịwa ahịhịa ma ọ bụ ịga ọnwa, anyị niile chọrọ ka emere ya ngwa ngwa. N’ezie, oge ụfọdụ ọsọ abụghị ihe niile. Offọdụ ezumike kacha mma bụ ebe anyị ga-anọ. Fọdụ n'ime ngwaahịa ndị gara nke ọma bụ ebe ndị na-ese ihe na-echeghị banyere ibute ahịa kama ha na-arụ ọrụ ka mma. Ma oge ụfọdụ, ịba ọsọ na-ala n'iyi. Emechakwa, ụgbọ ala Indy na-enweta naanị Mpịakọta 1.8.
Marakwa, ọ dị mma ịchekwa ego. You nwere ike ịkpọ ndị agha nke ndị ọrụ afọ ofufo na ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ka ha gbalịa ịmịpụta ihe, ma na-enwetakwa nsonaazụ ịtụnanya. Ma site na mbenata akwụ ụgwọ anyị na-etinyekwa egwu ịchụ aja. Chọ ebe ndị ahụ niile iji chekwaa na-ewe oge. Na ngwụcha, ụzọ iji nweta nsonaazụ kachasị mma bụ iji hụ na oge na ego abụghị ihe ọ bụla. Ọrụ kachasị mma dị mgbe niile mgbe anyị nwere oke akụ na ụba anyị.
Ọsọ, Onu ala, Ezi na arụpụtaghị ihe
Iwu isi mkpịsị aka a mgbe ụfọdụ na-adị ka ọ pụtara ntakịrị. Anyị niile maara na e nwere azụmaahịa na ọrụ ọ bụla. Ma, dị ka Doug Karr kwuru, atụmatụ atụmatụ na-egbu mgbu. Nke ahụ bụ n'ihi na ndị ahịa ga-etinye anyị mgbe niile n'ọnyà nke ịnwa ịnapụta ihe dị ngwa, dị ọnụ ala ma dịkwa mma n'otu oge.
Nke a agaghị ekwe omume. Ọ bụ ihe kpatara na oge igbu oge na-amị amị, ọrụ gafere oke mmefu ego na mma na-ata ahụhụ. Ga-eme ahịa.
N'agbanyeghị oke oru ngo a, iwu dị ọnụ-ala-bara uru. Ọ bụrụ n’ị bụ onye mmebe ihe osise na-arụ ọrụ na Photoshop, ịnwere ike ịchekwa oge site na ịhapụ idebe akwụkwọ gị iche na ịhazi. Y’oburu n’inwa igbusi onu ahia na ahia email gi, inwere ike ichu aja site na igbali ime ya n’ime ulo (ma obu ichu aja ozigbo site na iji ndi ahia ahia email.) Oburu n’ichoghi ihe edeputara n’ime edemede gi. ị ga-erite uru site na imepụta ya ọsọ ọsọ na ọnụ ala. Azụmahịa dị mfe ịhụ.
N'ụlọ ọrụ gị, ịnwere ike iji iwu dị ọnụ ala-nke dị ọnụ ala karịa naanị ịme mkpebi. I nwekwara ike iji ya maka ikwurita okwu n'etiti ndi nwere oke. Mgbe ndị mmadụ rịọrọ ka a rụọ ọrụ ozugbo, ị nwere ike ịjụ ha ma ha ga-ahọrọ ịchụ àjà dị mma ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ụgwọ dị elu. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịma maka nhọrọ dị oke ọnụ, jụọ ha ma ọ ga-akara ha mma ịhụ nhọrọ ndị jikọọ ego na atụmatụ ole ma ole ma ọ bụ ogologo usoro mmepe.
Get nweta echiche ahụ. Jiri ngwa-ọnụ-ala-mma! Ọ bụ ụzọ dị ike iji ghọta ụdị njikwa ọrụ, arụpụta yana mmekọrịta ndị metụtara ọrụ.
Tags: ọnụ alangwa ngwangwa ngwa ọnụ ala ọmammapriceprice ọsọ mmaarụpụtaghịàgwàrubrikọsọ
Etu ị ga-esi mee atụmatụ ihu igwe weebụ gị
WordPress: Kwusaanụ Ozi Ọdịnihu dị ka Ihe Na-abịanụ